Kenya oo baadi goobaysa Rag lagu tuhmay Al-Shabaab - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Kenya oo baadi goobaysa Rag lagu tuhmay Al-Shabaab
April 19, 2018 admin529
Dowladda Kenya ayaa shaacisay Magacyada iyo Sawirrada Saddex Dhallinyara ah oo loogu shakiyay inay u goosteen kooxda Al-Shabaab.
Mohamed Abdalla Asman oo loogu yeero Papa ama Raymond, Hamis Hemed oo loo yaqaan Baloteli iyo Ali Ahmed Ali, ayaa la waayay xilli hore oo Arbacadii ah, sida uu sheegay madaxa Isgaarsiinta Ciidanka Booliska Kenya, Charles Wahong’o .
Booliska ayaa sheegay in Mohamed Abdalla oo ka mid ah Saddexdan tuhmane hadda ka hor lagu xiray Magaalada Gaarisa 4-tii Oktoobar, 2013-kii, iyadoo la sii daayay 12-kii July, 2017 markii uu dhammaystay muddadii lagu xukumay.
Weerarkii ugu danbeeyay ee ay Kooxda Al-Shabaab ka geystaan gudaha Kenya ayaa ka dhacay 16-kii Fepraayo ee Sanadkan Iskuul ku yaalla Magaalada Wajeer, halkaasoo ay ku dileen Afar Macallin iyo Haweeneey u dhaxday mid ka mid ah Barayaasha, taasoo ay kufsadeen intii ayan toogan ka hor.
Howl-galladii ugu dambeeyay ee ay isla xilligaasi Ciidanka Booliska Kenya ka sameeyeen degaanka Merti, oo ka tirsan Gobolka Isiolo, ayay kusoo qabteen 36 Garnayl, 18 ka mid ah aaladaha qaraxyada laga sameeyo ee IED-ga loo yaqaan iyo 5 Qori oo ah Nooca AK 47 ah.
Waxaana sidoo kale lagu dilay isla howl-galkaasi mid ka mid ahaa tuhmanayaasha oo isku dayay inuu baxsado, iyadoo Laba xubnood oo kalana xabsiga la dhigay.
Dhageyso:Raysulwaaaraha Dowladaha dariskaa faraha hakala baxaan doorashada
Aqalka Sare oo Isku raacay in Guddi loo saaro Kiiska Cabdi qeybdiid